Google Ugbu a na Mgbata bụ ugbu a 'nyocha ihuenyo' | Androidsis
Google Ugbu a na Mgbata renamed ka 'Ihuenyo Search' na ọhụrụ Google beta
Beta nke ngwa Google tinyere ụnyaahụ wetara ya nnukwu ihe ọhụụ na nke m gosipụtara na vidiyo ebe m kọwara esi wụnye 'Na Ngwa' iji chọọ kọntaktị, egwu, ozi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ngwa niile ị rụnyere na ama gị; ọ dịkarịa ala ndị ahụ dakọtara, ebe ọ bụ na ọ dabere na onye mmepụta na nke a bụ ikpe. Ma ọ bụghị naanị na ọdịdị nke cutzọ mkpirisi 'Na Ngwa', ma enwere ndị ọzọ.
Google Ugbu a na Mgbata eme ugbu a amara dị ka 'Nchọgharị ihuenyo', a aha kwesịrị ekwesị karịa ihe ọrụ a na-arụ n'onwe ya. A maara na Google enwebeghị ike ịmegharị aha ndị ọrụ na ngwa ndị ọ na-ebupụta ngwa ngwa, yabụ anyị na-ahụ mgbe niile na aha ahụ gbanwere mgbe ọnwa gachara iji mee ka ọ dabara adaba na arụmọrụ ya wee si otú a ghọta nke ọma.
Ọ bụghị na anyị na-ekwu na ngwa gị niile enweghị isi na aha ha, dị ka Maps, Google Search, Draịvụ ma ọ bụ Foto, mana enwere mgbe ụfọdụ na hapụrụ anyị ntakịrị anya maka aha ndị ahụ gbanwere. Ọmụmaatụ, Google Ugbu a na Mgbata na-agba mbọ ịmata ihe dị na ihuenyo iji nye njikọ na ihe omuma banyere ị ga-ahụ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-azọpụta onwe anyị site na ịchọ ihe masịrị anyị site na ihe dị na ihuenyo ahụ.
Ọzọ nke ọma nke Google Ugbu a na Mgbata Ihuenyo Search, bụ na ee ị na-apị aka pịa otu okwu na ihuenyo, site na iji pịa dị mfe ị nwere ike ịtụgharị ya ozugbo, nke na-azọpụta gị ịnweta onye ntụgharị ntanetị.
Ma ọ bụ na ọ bụghị naanị ama ama Google rụrụ, kama ọ bụ Cards ugbu a na-«Nri». Otu n'ime mgbanwe ndị ahụ ga-eme ka nchọta ihuenyo ahụ nwekwuo nghọta ma nwekwaa arụmọrụ ya nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Ugbu a na Mgbata renamed ka 'Ihuenyo Search' na ọhụrụ Google beta
Xiaomi Mi Rịba ama 2, nke a ga-abụ nnukwu ọnụ ọhụụ ọhụrụ